अनवरत पुस्तक - Cloud Library
गृहपृष्ठ - किताबहरू - अनवरत पुस्तक
तपाईले आपक्ति अनुभव गर्नुभएको छ । बिपक्ति सह“नु कति कठिन हुन्छ तपाई जान्नुहुन्छ । तपाई पव्रmीरह“नुहुन्छ, कम्मर कस्नुहुन्छ, र जीवितै अवतरण हुने आशामा खराब दुर्दशाको छाल चढ्नुहुन्छ । जीवित रह“न जे आवश्यक पर्छ त्यही तपाई गर्नुहुन्छ ।
तर यदि यी परिक्षाहरूमा तपाईको जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमता भए के हुन्थ्यो होला ? यदि तपाईले सामना गरेको बिपक्तिले तपाईलाई बिश्वास र परिपक्वताको अर्को तहमा पु¥यायो भने कस्तो होला? यदि तपाई विपक्तिमा जीवित रह“ने मात्र नभई उन्नति हुनेगरी बनिनु भएको रहेछ भने के होला ?
अनवरत पुस्तकद्वारा, जोन बिवेरेले तपाईंलाई तपाईको हठको ताला फुकाउने यात्रामा लैजान चाहंनुहुन्छ । जसै उहा“ले बाइबलिय र वर्तमान व्यक्तिहरूका कथाहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ, उहांले शक्तिशाली नमुना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ः यी बिश्वासका बलिया पुरुष र स्त्रीहरू स्थिर रहेर जीवित मात्र रहंदैनन्् । तिनीहरूले विपक्तिलाई अनुहारमा हेर्छन र त्यसलाई पराजित गर्दछन् ।
परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाको शक्तिद्वारा सुसज्जित भई, तपाईले संकष्ट, प्रतिरोध र तपाईको जीवनका निम्ति परमेश्वरको योजना पूर्तिबारे जीवन परिवर्तन गर्ने सत्यहरू पत्ता लगाउनुुहुनेछ । परमेश्वरको एक बालकको रुपमा, कठिनाईलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्दै राम्ररी समाप्त गर्ने आवश्यक सामर्थ तपाईमा छ ।
डाउनलोड (~9.85 MB)